Semi-kudzima magetsi MagicalTex Vagadziri & Vatengesi - China Semi-kudzima magetsi MagicalTex Fekitori
China Wholesale Polyester Semi Kudzima magetsi Mucheka
MagicalTex Roller Blind Mucheka wakagadzirwa ne polyester ine simba rakakwira. Iyo semi kudzima magetsi iyo inogona kuchengetedza kuvanzika kwako zvirinani. Yedu jira ine yakaderera zororo rate, iyo inogona kuve nechokwadi kuti haina hurema kune iyo jira. Yakakora sirivheri-yakavharwa yakazara shading kumashure jira isirivha-yakavharwa, isina mvura uye mafuta-chiratidzo uye nyore kuchenesa. Tinogona kupa dzakasiyana siyana sarudzo yako. Iyo yakakodzera kwazvo chikoro, imba uye hofisi kushandiswa.
Tiri nyanzvi mugadziri inopofumadza kweanopfuura makore gumi nematanhatu. Chinangwa chedu ndechekuti ive nyore-yekumira kutenga kune vatengi vedu. Isu tinovavarira kungopa micheka yakakwana kune vatengi vedu. Tine MOQ diki, kunyangwe hazvo huwandu hwako hwakakura kana hudiki, tinogona kubatana newe. Tinogona kupa emahara sampuli kwauri kwekutanga kubatana.
Classical Curtain inopofumadza Micheka Kudzima magetsi
MagicalTex Inotyaira Window Shutters inopofumadza Mucheka wakagadzirwa ne polyester mune yakanaka mhando. Yakagadziriswa chigadzirwa ndeimwe yebhizinesi redu guru. Tine akasiyana mavara uye akasiyana hupamhi hwesarudzo yako. Chinhu chimwe nechimwe chine kutaridzika kwakanaka uye mhando yakanaka.Iye machira ndeye-oiri-chiratidzo uye haina mvura, zviri nyore kuchenesa, kuoma kana yangokwizwa. Uye ine kugona kwakanaka mumumvuri uye ine yakanaka yekufefetera mhedzisiro.Inokodzera yekushandisa kumba uye hofisi.
Isu tine anopfuura-makore gumi neshanu ruzivo mune anopofumadza machira uye zvigadzirwa zvekutengesa kune anopfuura nyika mazana maviri. Isu tiri vagadziri, tinotengesa zvinhu kune vatengi vedu zvakananga, zvinogona kukubatsira nekusiya mari yepakati. Chinangwa chedu ndechekuti hupenyu hwako huve nani. Tiine hunhu hwakanaka uye timu yebasa yakanakisa, isu tiri mukurumbira pakati pevatengi vedu.
Keteni Jira Semi Kudzima magetsi Mucheka Muchena Kuputira
MgicalTex Roller Blinds Mucheka wakagadzirwa ne polyester mune yakanaka mhando. Iyo polyester yarn ndeye 100% nyowani, uye zvese zvinotumirwa kubva kuHoneywell, zvinoita kuti ive nehunhu hwepamusoro. Tine akasiyana mavara uye akasiyana hupamhi hwesarudzo yako. Chinhu chimwe nechimwe chine kutaridzika kwakanaka uye mhando yakanaka. Iyo inokodzera French Window. Unogona kuva nenzira dzakasiyana dzekumisikidza, senge Kuisa Ceiling, Kunze Kuisa, Kuisa Kwekunze zvichingodaro.
Zvigadzirwa zvedu zvinovavarira kuita kuti hupenyu hwako huve nani. Zvigadzirwa zvedu kumanikidza kuramba uye hupenyu hwakareba hwebasa, maererano nehunhu hwakanyanya, shading mhedzisiro zvakare yakanaka kwazvo, pateni yakanaka-inotaridzika, yakapusa uye yakashongedzwa mamiriro. Tine MOQ diki, kana odha yako iri hombe, isu tinoronga zvigadzirwa zvako, uye kana odha yako iri diki, usatombo kunetseka, isu tine zvakajairika stock yezvinhu zvinopisa zvekutengesa. Nemutengo unodhura, zvigadzirwa zvedu zvinozivikanwa pakati pevatengi vedu. Tinogona kupa emahara sampuli!
Yakasarudzika Dhizaini Semi-Kudzima Roller Bofu Mucheka
MagicalTex Roller Blind Mucheka hauna mvura uye kudzivirira moto mune yakanaka mhando. Jira redu harina humbowo hwemafuta uye harina mvura, zviri nyore kuchenesa, kuoma kana yangokwizwa Uye ine kugona kwakanaka mune shading uye ine yakanaka yekufefetisa mhedzisiro. Iine advanced ultrasonic yekucheka tekinoroji, inoita kuti iite burr kumucheto, yakanakisa kwazvo. Tine akasiyana akasiyana mavara ako sarudzo, unogona kusarudza chero imwe.
MagicalTex Roller Bofu Mucheka chinangwa chekuita kuti hupenyu hwako huve nani. Zvigadzirwa zvedu kumanikidza kuramba uye hupenyu hwakareba hwebasa, maererano nehunhu hunochenjerera, shading mhedzisiro zvakare yakanaka kwazvo, pateni yakanaka-inotaridzika, yakapusa uye yakashongedzwa mamiriro, nyore kuisa. Nemutengo unodhura, zvigadzirwa zvedu zvinozivikanwa pakati pevatengi vedu. Uye isu tinogona kuita bhizinesi rakagadziriswa. Yekutanga kubatana, tinogona kukupa mahara emahara kwauri!
Yakagadziriswa Window Blind Roller Fabric SemiBlackout
MagicalTex Roller Blind Mucheka wakagadzirwa ne polyester. Ndiyo Semi blackout iyo inogona kuchengetedza kuvanzika kwako zvirinani. Tinogona kupa dzakasiyana siyana sarudzo yako. Iyo yakakodzera kwazvo chikoro, imba uye hofisi kushandiswa. Jira redu harina humbowo hwemafuta uye harina mvura, zviri nyore kuchenesa, kuoma kana yangokwizwa Uye ine kugona kwakanaka mune shading uye ine yakanaka yekufefetisa mhedzisiro.
Chinangwa chedu ndechekupa yakanyanya kukodzera keteni mhinduro kune vatengi vedu zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi 'saizi saizi. Tinogona kukupa iwe yakanakisa fashoni mhinduro. Tine MOQ diki, isu tine stock yezvizhinji zvezvigadzirwa zvedu, tinogona kuronga kutumirwa kwauri munguva pfupi. Tinogona kupa yekuisa rairo gwaro kune vatengi pasi rese.
MagicalTex Eco-Inoshamwaridza Roller Fabric Polyester Semi Kudzima magetsi kwakagadzirwa ne polyester. Ndiyo Semi blackout iyo inogona kuchengetedza kuvanzika kwako zvirinani. Iine advanced ultrasonic yekucheka tekinoroji, inoita kuti iite burr kumucheto, yakanakisa kwazvo. Tinogona kupa dzakasiyana siyana sarudzo yako, unogona kusarudza chero imwe. Iyo yakakodzera kwazvo chikoro, imba uye hofisi kushandiswa.
Nemhando yepamusoro yekugadzira, yedu yekugadzira inokwikwidza, tinoita 100% kuongorora zvese zvigadzirwa zvedu. Nguva yekugadzira ingangoda mazuva makumi matatu. Tinogona kuronga kuendesa nekukurumidza kana tiine stock. Isu tiri fekitori, zvigadzirwa zvedu zviri mune yakanaka mhando uye mutengo unokwikwidza. Uye isu tine yakaderera MOQ. Kubatira pamwe kwekutanga, tinogona kukupa mahara emahara.
MagicalTex Semi Blackout Roller Blind machira akagadzirwa ne polyester mune yakanaka mhando. Tine akasiyana akasiyana mavara ako sarudzo, unogona kusarudza chero imwe. Chinhu chimwe nechimwe chine chitarisiko chakanaka, ivo vakanaka, vane rupo uye vane hunyanzvi. Iine advanced ultrasonic yekucheka tekinoroji, inoita kuti iite burr kumucheto, yakanakisa kwazvo.
MagicalTex Blackout Roller Blind machira haana mvura uye kudzivirira moto mune yakanaka mhando. Tine akasiyana akasiyana mavara ako sarudzo, unogona kusarudza chero imwe. Uye isu tinogona kuita bhizinesi rakagadziriswa. Isu tiri vagadziri, tinotengesa zvinhu kune vatengi vedu zvakananga, zvinogona kukubatsira nekusiya mari yepakati. Yekutanga kubatana, tinogona kukupa mahara emahara kwauri!
Yakakwira Mhando Balcony inopofumadza Mucheka Semi Kudzima magetsi
MagicalTex Roller inopofumadza Mucheka Semi Kudzima magetsi Series zvigadzirwa zvinoitwa zvepolyester nemhando yepamusoro. Isu tinopa micheka yejacquard nenzira dzakasiyana dzekunamatira. Yakapetwa kumeso dhizaini yekumhara nzira inogona kugadzira semi kudzima micheka, furo chena yekumira nzira inogona kuita magetsi ekudzikisa machira. Iine advanced ultrasonic yekucheka tekinoroji, inoita kuti iite burr kumucheto, yakanakisa kwazvo. Zvigadzirwa zvedu zvakakodzera chikoro, hofisi uye kumba. Gamuchirai mameseji enyu!
Yedu machira ndeyekudzivirira moto uye isina mvura, inogona kupfuura NFPA701（USA）chitupa, uye kutsanya kwemavara kana Giredhi 4.5. Yakakwira mhando yakasvibirira polyester zvinhu zvinoita kuti machira edu ave anozivikanwa pakati pevatengi vedu. Tine MOQ diki, kana odha yako iri hombe, ticharonga kugadzirwa kwako, zvinoda mazuva makumi matatu kuti vazvigadzire. Kana yako odha iri diki, don'Hazvina kunetsekana, isu tine zvakajairika stock yezvinhu zvinopisa zvinotengesa zvinhu. Tinogona kupa emahara sampuli ako ekuti utarise mhando uye ruvara.
Kupisa Kutengesa Roller Blind Mucheka Ruviri Ruoko Dip Coati
MagicalTex Semi Blackout Roller Blind Fabric yakagadzirwa ne polyester ine mhando yepamusoro uye mavara akanaka. Iine mbiri kumeso kwemavara glue yekumatira nzira iyo inoita kuti ive nemhedzisiro yakanaka pakuchengeta kunze kwechiedza uye wega kuchengetedzwa kwepachivande. Yakanaka mhando polyester zvinhu zvinogona kuita kuti igare, hapana chakuvhuvhu, hapana chipfukuto, hapana deformation, hapana track mushure menguva refu-nguva kushandiswa.
Nyowani Dhizaini Keteni Bofu Mucheka Semi Kudzima magetsi
MagicalTex Nyowani Dhizaini Keteni Bofu Semi Kudzima magetsi Jira rakagadzirwa nepolyester. Kupupa furo chena kunoita kuti isangoita semi kudzima magetsi, asiwo ine chitarisiko chakanaka. Yakagamuchirwa nemicheka inoshamwaridzika zvakatipoteredza, isina-chepfu uye isinganetsi iyo inoita nharaunda yakasununguka kwauri. Iyo inokodzera French Window. Tine akasiyana mavara uye akasiyana hupamhi hwesarudzo yako. Uye isu tinogona kuita OEM bhizinesi. Chinhu chimwe nechimwe chine chitarisiko chakanaka, chakanaka, chine rupo uye chinoshamisira.
MagicalTex Nyowani Dhizaini Keteni Bofu Kusviba Mucheka ndechimwe chedu mbeveve dzemapofu. Inogona kukuchengetedza yakanyarara nharaunda iwe. Inokodzera imba nekushandisa hofisi.Machira edu haana mvura uye kudzivirira moto. Isu tinopa gumi-gore garandi kune yega yezvinhu zvedu. Uye nekuda kwekutanga kushandira pamwe, tinogona kukupa ivhu kwauri.